Wanti kun handaara barruu goodayyaa, saxatoo ykn gabatee. Sajoon kan mul'atuu danda'u yoo saxatoo, gabatee, wanta ykn goodayyaa filamaniidha.
Odeeffannoo dabalataa Gargaarsa HandaarotaBorderskeessatti argamurraa argachuu dandeessa. Akkasumas odeeffannoo akkamitti Gabatee dhangii barruu sajooHandaarotaa wajjiin barbaaduu dandeenyu.
Title is: Handaarota